Kuchengeta gorosi mica upfu vatengesi uye fekitori - China kurongedza gorosi mica poda vagadziri
Huajing yakanyorova pasi yekumhara giredhi mica upfu yakashandisa iyo mica flake kubva Lingshou Lubaishan Mineral, Hebei Province.Iyo inogadzirwa neyechinyakare kupwanya mweya kupatsanura uye kunyorova kukuya maitiro zvichiteerana Izvo zvakasikwa Muscovite mica chiita chinoshanda chinzvimbo mumhando dzakasiyana dzekupfeka kubvira nekuda kwekubatsira kwayo kwehupfumi. .
Huajing bemhapemha giredhi chakaita zvokugadzirwa mica kushandiswa ruoko-akagadzirwa kwetunhu flake, untrawhite uye inopenya.It zvinonzi nevakawanda kushandiswa mukuru-magumo unhani, kunze zviri zvakasikwa mica upfu, kupisa nemishonga aigona kuwedzera kusvika 1200 ℃, kuchena aigona kuva 99,9% , Kuremerera kwevhoriyamu kwakakwirira kwazvo kupfuura mica yechisikigo.
Huajing bemhapemha giredhi phlogopite inobva Inner Mongolia uye Xinjiang. Chigadzirwa chacho chinonyanya kukodzera kupfeka kunorema kunopisa, kunogona kuwana mhedzisiro mumapaipi emafuta, pendi dzemaraini, kupfeka mota chassis, uye kumahombekombe esimbi zvigadzirwa zvekuvaka anticorrosion.Uyezve, mumunda wekupisa kwakanyanya kusagadzikana kupfeka, inogona kuchinjika. kune yakasarudzika yekumhara nharaunda yetembiricha yepamusoro & kumanikidza kubva phlogopite yakanakisa maitiro ekuumbwa.
Huajing unhani giredhi Muscovite upfu akashandisa iyo mica flake kubva Lingshou Lubaishan Mineral, Hebei Province. Iyo yakasikwa Muscovite mica chiito chinoshanda chinoshanda mumhando dzakasiyana siyana dzekupfeka kubva pakukwanisa kwayo kwehupfumi.
Yakaomeswa mica upfu yakakodzera yekumaka mumugwagwa, kuvaka yekunze madziro pendi, plaster, anti-corrosion kupfeka, nezvimwewo. Inogona zvinobudirira kutamba zvakanakira mica-maviri-mativi zvinhu chimiro, kugadzirisa michina zvivakwa zvemuchina wefirimu, uye anti-kutsemuka .Its Yake yakanakisa uv yekudzivirira basa inogona kugadzirisa mamiriro ekunze kugona kwekupfeka.
Mica inonyanya kujekesa mu monoclinal crystal system, inova pseudohexagonal thin flake, scaly, platy, uye dzimwe nguva pseudohexagonal column.Hardness 2 ~ 3, yakananga giravhiti 2.70 ~ 3.20, yakasununguka density 0.3-0.5. yesimbi yezvinhu, iyo inogona kusimudzwa kubva pasi yakaderera kusvika pakati nepakati, uye tsvimbo yemheni inogona kuiswa.